Dembiga sixir ee shakiga waa shaki ku jiraa qofka ruux ahaaneed. Ciqaabtu waa indho la’aan xagga ruuxiga ah.
DOUBT waa eray loo wada isticmaalo dadka aan wax qorin iyo sidoo kale kuwa wax bartay. Laakiin in yar oo ka mid ah kuwa sidaas u sii shaqeeyaa ayaa u istaaga inay tixgeliyaan oo eegaan mabda'a uu eraygu u taagan yahay.
Shakigu wuxuu ka yimaadaa laba, laba, oo ku lug leh fikirka labaalnimada waxkastoo ku saabsan, iyo in si aan kala go 'lahayn wax walba lagu dheereeyo. Sida shakigu uga walaacsan yahay fikirka laba, ama laba-laboodka, waxaa had iyo jeer la socda sharrax la'aan, maxaa yeelay way kala qaybsan tahay ama u dhexaysaa labada. Fikradda laba waxay ka timaadaa maandooriye, kaas oo asalka u ah dabeecadda ama arrinta. Maandooriyaha ayaa iskumid ah, laakiin waxaa lagu muujiyaa mid ka mid ah sifadiisa - labo-labo. Midnimadu waa bilowga muujinta adduunka oo dhan. Labaqbalku wuu ku sii jirayaa atom kasta. Labaqeybku wuxuu kujiraa labada waji ee iskumid ah iyo kuwa kasoo horjeedka qeybta, walaxda.
Mid kasta oo ka mid ah kooxaha ka soo horjeeda si aan kala sooc lahayn ayaa u talisa tan kale, isaguna midka kale isagaa leh. Hal mar ayaa mid ka mid ah kor u kacaya ka dibna kan kale. Shaki ayaa had iyo jeer la socda labada, taas oo keenaysa in midba midka kale u jeediyo dhinaca kale oo iyana gadaal u celiso kan kale. Shaki ayaa kaliya naloo og yahay markay tahay qalliinka maskaxda, laakiin fikradda shaki ayaa ku jira dhammaan heerarka kala duwan ee arrinta, laga soo bilaabo bilowga muujinta illaa iyo helitaanka aqoonta oo dhammaystiran. Shakigu wuxuu ku shaqeynayaa adduunka oo dhan oo la muujiyey; isku mabda 'ah, oo ku kala duwan sida ay tahay diyaaradda ficilkeeda.
Shakigu asalkiisu waa jaahil. Waxay isu beddeshaa darajo iyadoo loo eegayo horumarka jiritaanka uu ku sugan yahay. Ragga dhexdeeda, shaki waa xaalad daran ee maskaxda, taas oo maskaxdu aysan go'aan ku gaari doonin iyadoo loo doorbidaayo mid ka mid ah laba maado ama shay, ama aan ku kalsoonayn midka kale.
Shaki ma aha baaritaan ku saabsan mawduuc kasta, mana aha cilmi baaris iyo baaritaan, mana ahan geedi socod fikir; in kasta oo ay badanaa la socoto fakarka, waxayna ka soo baxdaa baaritaanka iyo weydiinta mowduuc.
Shakigu waa sida daruur qaadaa maskaxda oo joojisa garashada garashada, iyo xalinta mashaakil kasta oo ku saabsan waxa la arko. Sida daruur, shaki ayaa kordhaya ama yaraanaya cabirka iyo cufnaanta sida qofku ku guuldareysto inuu u dhaqmo si waafaqsan fahamkiisa, ama waa isku kalsooni wuxuuna ku dhaqmaa kalsooni. Hase yeeshe shaki waa xaalad maskaxeed oo lama huraan u ah in la khibradeeyo oo laga gudbo kahor caddeynta aragtida maskaxda ee la gaari karo.
Ku xidhan oo la xidhiidha shaki, sida awoowayaasha, macallimiinta, saaxiibbada, farcanka, iyo addoommada shakiga, waa jahwareer, shaki la’aan, dulqaadasho, dulqaadasho, dulqaad, jahwareer, jahwareer, aaminaad la'aan, gaalnimo, shaki, tuhun, jahwareer, deg deg, madow, calool xumo, isbadal la'aan, go'naan, shaki la'aan, addoonsiga, caajisnimada, jaahilnimada, cabsida, jahwareerka, iyo dhimashada. Kuwani waa qaar ka mid ah shuruudaha shakiga lagu yaqaan.
Shaki waa maskax qoto dheer, dhab ahaantii waa isku mid oo waa mid ka mid ah howlaha maskaxda: shaqadaas ama astaamaha maskaxda ee loo yaqaan gudcurka, hurdada. Shakigu waa mid ka mid ah sababihii go'aamiyay qaab ahaan jir ahaaneed ee maskaxda bilowgii hore ee safka dheer ee maskaxda. Shaki wuxuu qayb muhiim ah ka ahaa ficillada aadanaha, wuxuu ka mid ahaa sababihii ugu waaweynaa ee sababay silica badan ee bini aadamku u dhaxlo iyo shuruudaha ay bini aadamku xilligan la halgamayaan. Shaki waa maanta mid ka mid ah carqaladaha horumarka iyo horumarka aadanaha.
Shakiga dadka ka hor imanaya marwalba noloshiisa maalinlaha ah iyo dhibaatooyinka muhiimka ah ee noloshiisa ayaa dhamaantood soo muuqday kahor, noloshii hore xaalado kaladuwan. Waxay u muuqdaan maanta shakiyo maxaa yeelay lama adkaan shalay. Waxay maanta u taagan yihiin inay carqaladeeyaan horumarka nin ama in laga adkaado aqoonta iyada oo loo maro ficil. Wareegtada ama waqtiga shakiga oo soo ifbaxa waxay kuxirantahay horumarka iyo da'da oo wareegaan lamid ah oo shaki uu ku dhacay qofka la kulmay.
Waxaa jira afar nooc ama noocyo shaki ah. Waxay la xidhiidhaan nolosha jidhka iyo saddexda adduun ee ku sugan iyo hareeraheeda: shaki xagga jidhka ah, shaki xagga maskaxda ah, shaki xagga maskaxda ah iyo shaki xagga ruuxiga ah. Kuwani waa astaamaha noocyada kala duwan ee ragga oo aan la kulano, iyo sidoo kale afarta nin ee zodiac-ka kuwaas oo sameysma isla markaana wata nin kasta oo shaqsi ah. Afartaas nin waxaa looga hadlay oo lagu muujiyey Tafaftiraha "Zodiac." Eeg “Ereyga,” Maarso, 1907 (Jaantuska 30).
Shaki xagga jidhka ahi wuxuu la xidhiidhaa dunida jireed iyo jidhka jidhka, wakiilkiisa (maktabadda, ♎︎). Maaddaama maskaxdu ku shaqeyso jirkooxda jirka waxaa lagu weeraraa dhammaan ifafaalaha dunida jismiga ah ee ku saabsan ficilka jirka ee jirka jirka. Markaa maskaxdu waxay bilaabeysaa inay ka shakinto laga bilaabo waqtiga ugu horreysa inay ka feejignaato inay ku dhaqanto jidhka jir ahaaneed, iyo in jirkeeda jirku uu ka warqabo adduunka jir ahaaneed. Xayawaanku shaki kuma jiro sida bina aadamka. Xayawaanku wuxuu bilaabaa inuu lugeeyo isla marka uu dhasho, laakiin aadanuhu ma awoodo inuu istaago ama xitaa inuu gurguurto wuxuuna u baahan yahay bilooyin dhaadheer ama xitaa sanado ka hor inta uusan isku hallayn cagaheeda isla markaana uu sii wado isudiyaarinta jirka inta uu socdo. Xayawaanku bini aadamka wuxuu u keenaa isla dareenka waalidkiis sida eeyga ama kubka waalidkiis. Hadday u sabab tahay dhaxalka keli ahaanshaha ilmaha waa in lagu qasbaa inuu ku lugeeyo oo ku ciyaaro ciyaarta sida ugu dhaqsaha badan sida weyl ama eey. Laakiin ma awoodo. Tan waxaa u sabab ah xaqiiqda ah in xayawaanku aadamku u hoggaansan yahay kaliya ma aha dareenka xayawaanka iyo u janjeera awoowayaasheeda, laakiin sidoo kale wuxuu ku xiran yahay hay'ad shaqsiyeed, maanka; iyo maskaxda cusub ee ku soo biirtay, iyada oo aan lahayn kalsoonida khibradda jirta, ma awoodo in la socdo; Waxay ka shakisaa oo ka baqdaa in jirkiisu dhici doono. Haddii lagu tuuro biyaha markii ugu horreysay, faras, bisad, ama xayawaan kale, ayaa isla markiiba tegi doona xeebta, in kasta oo aysan si dabiici ah biyaha u qaadan. Waxay ku dabaalan kartaa iskudaygii ugu horreeyay. Laakiin nin markii ugu horreysay la dhex geliyay weel dhex yaal, ayaa harraadsan, in kasta oo laga yaabo inuu bartay aragtida dabbaasha ka hor intuusan isku dayin. Cilmiga shakigu wuxuu farageliyaa xayawaanka dabiiciga ah ee jidhka bini-aadamka wuxuuna ka hortagaa inuu adeegsado awooddiisa dabiiciga ah, iyo inuu ku dhaqmo aragtida dabaasha ee ay bartay. Ficilka dabiiciga ah ee jirka jirka waxaa badanaa lagu hubiyaa shaki ku soo baxa maskaxda. Shakigani wuxuu maskaxda ku hayaa hal nolol ilaa mid kale, adduunkan jireed, ilaa shakiga laga adkaado. Jidhka jidhku wuxuu la jaan qaadayaa dunida jir ahaaneed, laakiin maanka ma aha dunidan; waa wax qariib u ah adduunkan jireed iyo jidhkiisa. Maskax la’aanta maskaxda ee jirkeeda waxay u ogolaanaysaa sheyga shakiga ku haya maskaxda inuu xakameeyo ficilkiisa iyo faragalin ku sameyso xakameynta jirka. Tani waxay qusaysaa dhammaan xaaladaha nolosha iyo duruufaha iyo jagooyinka u yimid nin dhaxal ahaan.
Tartiib tartiib, maskaxdu waxay la qabsatay jirkeeda jir ahaaneed waxayna awoodaa inay ku xakameyso dhaqdhaqaaqyadeeda si sahlan oo nimco leh. Haddii, horumarka joogtada ah ee ninka, ka dib markuu barto waxyaalaha dunida jir ahaaneed ee looga baahan yahay inuu ku barto - tusaale ahaan, jimicsiga iyo edbinta jirka, hagaajinta iyo noloshiisa iyada oo loo marayo ganacsi ama xirfadle mawqifkiisa, caadooyinka bulshada ee meeshi uu ku nool yahay, iyo suugaanta muddada - oo uu aad ugu bartay adeegsiga caadiga ah sidii looga gudbi lahaa shakikiisii ​​hore, iyo haddii uu bartay inuu kalsooni iyo aaminaad ku helo booskiisa, ka dib maskaxdu waxay soo martay marxaladaha bilowga ah ee shakiga waxaana la soo gudboonaatay shakiga ka soo ifbaxaya waxyaalaha aan la garaneynin.
Marka wax ka mid ah boqortooyooyinkii adduunyada maskaxdu ay ku soo biiraan ama loo gudbiyo dareennada jidheed, shaki ayaa ku soo dhaca maskaxda in ay jirto adduun aan la arki karin, gudaha iyo hareeraha jidhka, maxaa yeelay maskaxdaasi waxay la qabsatay oo ay ka gartay Jidhka jidh ahaaneed, oo ay wax ku bartaa oo ku xilsaartaa jidhka iyo waxyaalaha jidhka jidhku leeyahay. Waxay ka shakisan tahay in ficil jireedku uu asal ahaan ka soo jeedo il aan la arki karin. Shakiga noocan oo kale ahi wuxuu la xiriiraa adduunka astaanka ama maskaxda ee maskaxda iyo damaceeda. Wakiilkiisu waa bina-aadamnimada, ama qaab jidh (virgo-scorpio, ♍︎ – ♏︎), oo leh dareenka xayawaankiisa iyo rabitaankiisa.
Kuwani waa shakiga ninku inta badan la macaamilo oo ka hor yimaado nolol maalmeedkiisa iyo shucuurtiisa. Halkan waxaa ah ilaha dhaqsaha leh ee ficillada jirka. Halkan waxaa ah xoogagga iyo hay'adaha u dhigma, ama yihiin, sababaha ficillada jirka iyo caadifadaha sida xanaaqa, cabsida, masayrka, iyo nacaybka, iyo dareennada kale sida raaxada iyo dareenka farxadda nacasnimada ah. Halkan waxaa ah xoogagga iyo hay'adaha ku hawlgalaya jiritaanka maskaxda maskaxeed ee sida fiican loo hagaajiyay ee aadanaha. Dareenkaas iyo dareemahan waxaa lagu soo qaatay jirka jir ahaaneed oo leh dareemadiisa iyada oo loo marayo jirka maskaxda. Awoodaha lama arki karo qofka jirka ah, laakiin waxay u muuqdaan ninka maskaxda ku haya markii, dhaqamada qaarkood, ama “dhexdhexaad”, ama cudurka, qofka maskaxda wax ka qaba inuu si ku filan uga sii daayo ama uga soo baxo xuubka jirka jirkiisa sidaa darteed Dareenka dareenkiisu wuxuu ku xardhan yahay octave-ka sare iyo gudaha jirka.
Dhamaan shakiga ku dhacay ninka jir ahaaneed waxay halkan u leeyihiin inay la kulmaan oo ay ka guuleystaan, xitaa sidii looga adkaaday jirka. Waxaa looga adkaaday adduunka maskaxda iyo qaabka astral jirka oo kaliya ilaa heerka ay la kulmeen ama ka adkaadeen jirka.
Gudaha iyo wixii ka sarreeya adduunyada maskaxda iyo maskaxda iyo raggoodu waa dunidu maskaxda iyo maskaxdeeda jidh ahaan ku xidhan (fikirka nolosha, ♌︎ – ♐︎).
Kani waa dunida intee insaanku ku nool yahay, iyada oo ay ugu wacan tahay baahida maskaxdu u qabato jidhkiisa jir ahaaneed, waa adduunkii uu inta badan ka shakin lahaa. Laga soo bilaabo adeegsiga caadiga ah ama ku xadgudubka jirka jirka, maskaxdu waxay la xiriirtay jiritaankeeda nolosha jir ahaaneed sidaa darteed waxay iloobeysaa jiritaanka dhabta ah iyo laftiisa inuu ka duwan yahay jirkiisa jir ahaaneed. Maskaxdu waxay ku gartaa fikirka jirkeeda iyo nolosha jir ahaaneed oo keliya, iyo marka aragtida la soo jeediyo in maanka iyo fikirka ay ka duwan yihiin jirka jir ahaaneed, in kastoo ay isku xiran yihiin, maskaxdu way shaki qabtaa waxayna u janjeedhaa inay diidaan bayaankan.
Shakiga waxaa laga dhex helayaa inta badan kuwa aqoonta leh marka loo fiiriyo kuwa aan aqoonta lahayn, maxaa yeelay ninka wax barta waxaa lagu bartaa waxyaalaha kaliya ee maanka lagu hayo ee la xiriira adduunka jir ahaaneed, iyo kan naftiisa ugaarsiga ka fikiraya waxyaalaha iyo maadooyinka taas si adag ula xiriirto adduunka jir ahaaneed ayaa loo diidey inuu ka tago mawjadda fikirkiisa oo uu ku koraan diyaarad sareysa. Ninkii wax bartay waa sida geed canab ah oo kale, kuna dheji wixii ku xidhnaa oo isku xidhay. Haddii canabku diido inuu xidho, waa inuu awood u yeeshaa inuu ka tago xididadiisa, ku dhufo oo ka koraan ciidda waalidkeed, way joogsan doontaa inay noqoto geed canab ah. Haddii ninka wax bartay laga sii daayo maskaxda dadka kale, oo fikirradiisa ay tahay in ay gaaraan kuna koraan waxyaalaha waalidka ee maskaxda kale ka soo koray, markaa, sida geedka, uma baahna in uu ku koro koritaan kale oo ay waajib ku tahay inuu raaco waxa ku tiirsanaantiisa ah ee isagu isagu leeyahay, laakiin wuxuu noqon lahaa kobcin shaqsiyeed wuxuuna xaq u leeyahay inuu ku fuulo hawada xorta ah oo uu iftiinka dhinac walba ka helo.
Canabku wuxuu ku dhegtaa ishiisa, si kale uma sameyn karo sababta oo ah waa geedka canabka ah, koritaanka khudradda. Laakiin aadanaha ayaa awood u leh inuu ka tirtiro fikirkiisa kana soo baxo koboca barashada maxaa yeelay waa nin-abuur asal ahaan ruuxiyan ah oo waajibaadkiisa iyo masiirkiisu ay tahay inuu ka soo baxo boqortooyooyin xasaasi ah oo dabiiciga ah una gudubta ifka ifka ee aqoonta ruuxiga ah. . Ninkii aqoonta iyo socod-baradka ah kama korayo waxbarashadiisa shaki awgood. Shaki, iyo cabsi taas oo ah cunugga korsashada ee shakiga, waxay ku sii xirnaanayaan inuu ku sii xirnaado barashada. Shaki ayaa sababay inuu ka shakiyo. Aad ayuu u gaabiyaa; Kadib cabsi ayaa qabta oo dib ugu riixeysa hawdka barashada oo uu jecel yahay inuu noqdo dhamaadka dadaalka maskaxda oo dhan, ama haddii kale wuxuu sii wadaa inuu shakiyo ilaa uu wax walba ka shakiyo, oo ay ku jiraan waxbarashadiisa iyo shakigiisa.
Maskaxda nafteeda u maleyneysa inay tahay maskax ku shaqeysa adduunka maskaxda, oo ka duwan tan jirka, had iyo jeer waxaa lagu dilaa shaki. Dhibaatooyinka maskaxdu kula tartamayso - sida: farqiga u dhexeeya iyo cilaaqaadka u dhexeeya Ilaah iyo dabeecadda, asalka aadanaha, waajibaadka nolosha, masiirka kama dambaysta ah, waa kuwa ka hor yimid dhammaan maskaxda iskudayaysa inay si xor ah uga hawl galaan dunida maskaxda.
Shakiga ku saabsan mid kastoo ka mid ah su'aalahan, ama suurtagalnimada xorriyadda maskaxda ee ka yimaadda dareenka, waxay u muuqataa inay mugdi ku tahay aragga maskaxda. Haddii aragga maskaxdu mugdi ku jiro, maskaxdu waxay lumisaa kalsoonida nuurkeeda. Iftiin la'aan ma arki karto ama ma xallin karto dhibaatooyinka, kumana arki karto jidkeeda, sidaa darteedna waxay dib ugu dhacdaa meelaha xasaasiga ah ee fikirka ay ku baratay.
Laakiin maanka ku kalsoon kalsoonida ficilkiisa xorta ah wuxuu siideyaa mugdiga shakiga. Waxay u aragtaa habka ay wax u qabato iyada oo loo marayo dunida fikirka taas oo ay abuurtay. Helitaanka kalsoonida iyo maskax ahaan aragtideeda iyo fikradaha dunida, waxay u aragtaa in qaababka adduunyada maskaxda ay ku go’aamiyaan afkaarta adduunka maskaxda, in jahwareerka damacyada iyo jahwareerka shucuurta ay sabab u tahay jahwareerka fikradaha iyo isweydaarsiga fikradeed ee is-khilaafsan, ee sababta xoogagga iyo xayawaanku ay u leeyihiin sida qaab adduunyada dhimirka waxaa lagu go'aamiyaa fikradaha maskaxda soo saare. Markii tan la xaqiijiyo, dhammaan shaki gelinta ku saabsan sababaha shucuurta iyo dareemka waa la sifeeyaa, qofka wax qabadkiisa si cad ayaa loo arkaa sababahoodana waa la yaqaan.
Shakiga ku saabsan adduunka ruuxiga ah iyo ninka ruuxiga ahi wuxuu la xiriiraa qofka aan dhiman karin ee ka cawiya ama xiriiriya ninka jirka ah maskaxda maskaxda. Isaga oo ah wakiilka adduunka ruuxiga ah, Eebbe, ee Maanka Caalamiga ah, ninka ruuxiga ahi waa maskaxda bina aadamka, shakhsiyadda adduunkiisa ruuxiga ah (kansarka-capricorn, ♋︎ – ♑︎). Shakiyada noocan oo kale ah ee lagu dilo maskaxda maskaxda ayaa ah: in aysan sii socon karin dhimashada ka dib; in wax walba oo dunida jirku ku dhashaan dhalasho oo ay ka gudbaan dunida jidhka ah xagga dhimashadaba, sidaas oo kalluunkuna wuu ka dhammaan doonaa dunida jidhka oo wuu joogsan doonaa weligiisba. fikradahaasi waxay noqon karaan wax soo saar ama falcelin ka timid nolosha jidhka, halkii ay noqon lahaayeen waxa sababa nolosha jidhka. Arinta wali ka sii daran ayaa ah, in kasta oo maskaxdu ku sii adkaysanayso dhimashada kadib, waxay u gudbi doontaa xaalad u dhiganta tan nolosha dhulka, in nolosha dhulka ee jidhka jidhku ay weligeed sii jiri doonto weligeedna aysan ku noqon doonin dhulka nolosha.
Maskaxdu waxay shaki gelisaa jiritaanka ama jiritaanka suurta galka ah ee jira inuu jiro adduun ruuxi ah oo aqoon u leh fikradaha dhammaan heerarka jiritaanka, kaasoo fikirku asal ahaan ka soo jeedo; in adduunkan joogtada ah ee aqoonta, oo leh qaababkiisa aan dhiman karin, ay sabab u tahay sharafta maskaxda aadanaha halkii ay ka ahayd bayaan xaqiiqada ruuxiga ah. Ugu dambeyntiina, maskaxda maskaxdu waxay shaki gelisay inay lamid tahay fikirka dhimirka iyo kan caalamiga ah. Shakigani waa midka ugu halista badan, burburka iyo mugdiga mugdiga ku ah dhammaan, sababta oo ah waxay ku kaliftaa inay kala soocdo maskaxda taas oo ah mid ku xiran shuruudaha ku meel gaarka ah, waalidkeed weligiis iyo waara.
Shaki waa dembiga sixirka. Dembigan sixirka ah ee shakigu waa shakiga qofka ruux ahaaneed. Ciqaabta shakigaani waa indhoolasho xagga ruuxa ah iyo karti la'aan aragtida runta ah ee wax kastoo xitaa la tilmaamay.
Sababta shakiga ragga kaladuwan waa mugdiga maskaxeed ee aan kobcin. Ilaa iyo inta mugdiga laga tuurayo ama loo beddelayo nalka gudaha, ninku wuxuu sii wadi doonaa inuu shaki galo oo wuxuu ku sii jiri doonaa xaaladdii uu isagu naftiisa ka helay. Shakiga ah in dhimasha la'aanta la'aanteed ay kobcinayso maskaxda ninku waxay ku yeelan doontaa kuwa iyagu ku talin lahaa noloshiisana ku maamuli doona maskaxda maskaxdiisa. Cabsida waxaa lagu hayaa maskaxda horteeda waxayna ka dhigeysaa mataanaha mataanaha shakiga. Raggu waxay u oggolaadaan inay noqdaan wadaaddo-gowraca, lagu hayo maskaxda mugdiga ah oo lagu qasbo inay isu soo gudbiyaan mataanaha shakiga iyo cabsida. Tani kaliya ma khuseyso tirada dadka jaahiliinta ah, laakiin sidoo kale ragga wax baranaya ee maskaxdoodu ku shaqeysay tababar hore oo jeexdin ah qaar ka mid ah, oo sidaas darteed xaddidaya cabsida laga qabo inay ka ganacsadaan wixii ka sarreeya jeexdintooda oo shaki geliyaan awoodda ay ku leeyihiin inay ka baxaan.
Shaki shaki ayaa dhalinaya. Ninkii had iyo jeer shaki ku jiro waa naftiisa murug iyo cayayaan ku xeeran oo dhan. Shakiga sii socda ayaa ka dhigaya nin inuu qeylinayo, oo u jilciya qofka jilicsan ee ku adkeysta inuu ficil sameeyo, isagoo ka baqaya natiijada falkiisa. Shakigu wuxuu u rogi karaa maskaxda wax baarista iyo wax weydiinta masiibo, kuwaas oo ay ku faraxsan tahay in la doodo oo la tartamo, in lagu tuuro jahwareer ama ka xanaajiyo aaminsanaanta kuwa uu la xiriiro, ee ku saabsan rajada ama kalsoonida nolosha mustaqbalka, iyo, meeshii iimaanka iyo rajada laga lahaa, inaad ka tagto niyad jab, qanac la'aan iyo rajo xumo. Shakigu wuxuu shaki geliyaa maskaxda qof aan daacad ahayn oo aan qummanayn oo shaki gelinaya ujeeddooyinka dadka kale, oo wax kasta qalad ku leh, oo cayda iyo magac xumada oo isku dayo inuu ku faafo dhammaan shakiga ku jira maskaxdiisa.
Shakigu waa qeexid la'aan taas oo keenta in maskaxdu kala goyso inta u dhaxaysa, oo aan waligaa go’aansan, hal shay ama wixii kale. Mugdi ayaa maskaxda looga tuuraa natiijada ka dhaxaysa laba dowladood ama in ka badan oo aan degin ama go'aan ka gaarin. Markaa waxaan helnay rag murugo leh oo aan waligood go'aan ka gaadhin, ama, laga yaabo inay iyagu go’aansadaan, waxay ku guuldarreystaan ​​inay ficil ka muujiyaan shaki awgiis ama cabsi ka imaanaysa go'aanka. Shakila'aanta maskaxda iyo diidmada ficil ayaa maskaxda ka yaraynaysa go'aan qaadashada iyo ficilka, laakiin waxay dhiiri galisaa caajisnimada iyo jahliga waxayna abuurtaa jahwareerka.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira ujeeddo laga shakin karo, oo ah qayb ay ka ciyaari karto horumarka nin. Shakigu waa mid ka mid ah bilowga maskaxda ee galaga iftiinka. Shakigu wuxuu ilaaliyaa dhammaan waddooyinka aqoonta. Laakiin shaki waa inu ka adkaadaa maskaxda haddii maskaxdaasi doonayso inay si miyir leh ugu gudubto adduunyada gudaheeda. Shakigu waa ilaaliyaha aqoonta ee ka hortagaysa kuwa cabsida leh iyo kuwa maanka liita inay ka gudbaan meeshooda. Waxay shaki gelinayaan carruurta caqliga yar ee jeclaan lahaa inay ku koraan dadaal la'aan, oo ay noqdaan kuwa caqliga leh oo aan aqoon lahayn. Sida mugdigu uu muhiim ugu yahay koritaanka xoolaha iyo dhir, sidoo kale mugdiga shakiga ayaa lagama maarmaan u ah koritaanka.
Maskaxda shakiga leh ee aan baran xukunka saxda ah ama ficilka saxda ah waxaa lagu muujiyey waqtiyo muhiim ah nolosha. Noocan oo kale ah, tusaale ahaan, sida marka mid u taagan jahwareerka sida laba gaari oo ka soo dhowaanaya jihada ka soo horjeedda. Wuxuu marka koowaad eegaa hal dhinac, ka kalena waa kan, ma u go'aansan sidii uu halista uga baxsan lahaa. Go'aankaan oo shaki uu ku jiro, wuxuu umuuqdaa inuu ku qasbay geerida naxdinta leh ee ficilka khaldan, maaddaama qof aan si isdaba joog ah ugu soconaynin cagihiisa fardihii.
Qofka joojiya inuu go'aan ka gaadho inta u dhexeysa laba jagadood ayaa u dhiibtay, isaga oo leh shaki uu ku qabo doorashada saxda ah, sida caadiga ah waxaa loo arkaa inuu iska daaya fursadda ugu fiican. Fursad waligeed ma sugeyso. Fursad waligeed way joogtaa inkasta oo si joogto ah looga gudbo. Fursaddu waa socodsiinta fursadaha. Ninka shakiga leh ayaa ka xanaajinaya fursadda hadda uun, iyo kii uu lumiyey, laakiin waqtiga uu ku barooran lahaa luminta iyo eedaynta qof, ayaa ka horjoogsanaya inuu arko fursadda markaa jirta, laakiin mar labaad lama arkin illaa ay isaguna hadda dhammaaday. Sii-socoshada iyo ku guul darreysiga in la arko fursadaha ayaa sababa in qofku shaki galo awoodda uu u leeyahay inuu wax doorto ama ficil sameeyo. Mid had iyo jeer shaki geliya fikirkiisa iyo ficilkiisa wuxuu keenaa jahwareer, jahwareer, iyo rajo beel, kuwaas oo dhammaantood ka soo horjeedda kalsoonida ficil. Ficil kalsooni ayaa ku hagaya gacanta kubbad toos ugu tuuraysa sumadda. Gacanta wax qabadkeeda, socodka, socodka jidhka, garaacista madaxa, aragtida isha, codka codka, xaaladda maskaxda ee shakiga ama qofka wax qabta kalsooni ayaa laga yaabaa in la arko.
Shakigu waa shayga mugdiga ah ee aan dhammaadka lahayn ee maskaxdu ku halgameyso oo ay u sii adkaato sida ay uga adkaato. Aqoonta ayaa ku timaadda ama u koray sidii shakiga looga adkaaday, laakiin shaki ayaa aqoonta lagaga adkaadaa. Haddaba sidee baynu uga gudbannaa shaki?
Shaki ayaa laga adkaaday go'aan kalsooni leh oo ay ku xigto ficil go'aanku muujinayo. Baadhitaanka sida ugu wanaagsan ee laba maado ama shay ma aha kalsoonida indho la’aanta ah ee ficilka jaahilnimada, mana aha wax shaki ah, in kasta oo shaki uu galo oo uu ku guuleysan doono marka maanku diido inuu go'aan ka gaadho midkoodna. Shaki ma go’aansado; had iyo jeer faragalin ayey ku sameysaa kana hortagtaa go’aanka. Haddii mid ka adkaado shaki, oo ku saabsan doorashada u dhexeysa laba shay, ama go'aaminta su'aal kasta, waa inuu, ka dib si taxaddar leh uga fiirsado su'aasha, go'aansadaa oo u dhaqmaa sida ugu habboon, shaki la'aan ama cabsi kama qabaan natiijada. Haddii mid sidaas u go'aamiya ama u dhaqma uu khibrad yar u leeyahay go'aankiisa iyo ficilkiisa ayaa caddayn kara inay khaldan yihiin, runtiina, kiisaska noocaas ah, badanaa waa khalad. Si kastaba ha noqotee, waa inuu sii wadaa inuu barto maaddada ama su'aasha xigta uuna go'aansado oo uu u dhaqmo si waafaqsan go'aankiisa, cabsi la'aan. Go'aankan iyo ficilkan waa in la qaadaa kadib marka si taxaddar leh loo eego khaladka lagu sameeyay go aankii hore ee khaldan iyo ficilka. Inaad dib ugu laabatid shaki aan macquul aheyn kadib markii ficilku qofku cadeeyay inuu khaldan yahay, in kastoo la rumeysan yahay inuu wakhtigaas sax ahaa, waxay dib u dhac ku noqotaa maskaxda oo waxay ka hortagtaa koritaanka. Qofku waa inuu gartaa qaladkiisa, gartaa wuuna saxaa isagoo sii waday ficilkiisa. Khaladkiisa waa inuu u anfaco isaga oo u saamaxaya inuu arko.
Marka la sii wado go'aanka iyo ficilka, garashada qaladaadka qofka iyo dadaal aad u weyn oo lagu garto laguna saxo, mid ayaa xallin doonta sirta ficilka saxda ah. Mid ka mid ah wuxuu baran doonaa go'aaminta iyo ficilka wuxuuna xallin doonaa qarsoodiga ficilka saxda ah ee iimaanka adag iyo aaminsanaanta inuu yahay nuxurka mid ka mid ah Mind Universal ama Ilaah, iyada oo loo marayo shaqsiyaddiisa, bina aadamka ama maskaxdiisa rabbaaniga ah, iyo in miyirkiisa dhabta ah isagoo ka yimid ishaas oo iftiin doona fikirkiisa. Haddii mid ka fikiro fikirkaas, si joogto ah maskaxda ugu hayo, go'aan ka gaadho maankiisa oo uu u dhaqmo si waafaqsan go'aanka, muddo dheer kuma baran doono inuu si caqli leh u go'aamiyo oo uu u dhaqmo caddaalad, go'aankiisa saxda ahna ficil uun buu la imaan doonaa. galay dhaxalkii aqoonta oo uu ilaahay dhalay, sida ugu dhakhsaha badan uu kasbaday.